Xirfadlayaashu waxay u yimaadaan inay helaan dalool madow oo aad u weyn oo daloolka madow ee galakkeenu u eg yahay ilmo - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » SAYNISKA Xirfadlayaashu waxay u yimaadaan inay helaan dalool madow oo aad u weyn oo daloolka madow ee galakkeenu u eg yahay ilmo - BGR
Wadnaha gala galadeena waa dalool madoow oo madmadow leh oo wax walba ku soo dhowaada. Waa wax aad u weyn, oo leh malaayiin 4 jeer oo ah Sunnadayada, laakiin cabirku waa shay qaraabo ah marka aan ka wada hadalno adduunka, iyo astronomers-ku waxay arkeen dalool madow oo galaxy fog ah. ceebiyow annaga [LagalaxieHolm15Absolves oo ku saabsan 700millionyear-sano, taas oo adkeyneysa barashada laakiin si fiican u og waa in godka madow ee qalbigiisa ku jira uu yahay kii ugu weynaa ee abid la arko. Xaqiiqdii, cilmi baarayaashu waxay rumeysan yihiin in godka madow ee Holm 15A inuu ugu yaraan 10 000 jeer ka weyn yahay midka galakalkeena asalka ah.
in warqad cusub oo cilmi baaris ah oo uu faray Kianusch Mehrgan oo ka tirsan Machadka Max Planck wuxuu daaha ka qaaday in godka madow ee Holm 15A uu sagaal jeer ka weyn yahay sidii la filaayey, isla markaana ay shaki la’aan tahay inuu yahay godkii ugu weynaa ee madow ee abid la arko. Waxaa loo malaynayaa inay ugu yaraan laba jeer ka badan tahay godkii hore ee madow ee hore oo ay ogaadeen saynisyahano
. Xaqiiqada ah in ay tahay mid aad u cajiib badan oo macnaheedu waa in kasta oo ay masaafad ballaaran u leedahay Dunida, waxay u noqon kartaa musharrax wanaagsan oo sawirka adeegsanaya hadda. Teknolojiyada. Saynisyahannadu waxay muujiyeen muuqaalkii ugu horreeyay ee god madow oo weligood la qabtay, isla markaana isla iskumid ah telescopes ka dhigay muuqaalkan suuragal ayaa laga yaabaa inuu sidoo kale awoodo inuu muujiyo taas oo ah Holm 15A.
Xirfadlayaasheeda cilmiga xiddigiska waxay waxbadan ka barteen caalamka iyo meesha aan ku nool nahay iyagoo leh telescopes aad u xoog badan, laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo aannaan wali ku fikirin. Markii tikniyoolajiyaddu ay sii socdaba oo aan helno awood aan ku baarno qoto dheer oo qoto dheer qalbiga, daahfurka cusub ayaa la filayaa iyo godka madow ee Holm 15A ayaa laga yaabaa inaysan sii ahaan doonin qofka heysta rikoorka.
La soco qubayska saxan ee meteoriga ee reer Faariix oo gaadha heerkiisa ugu dambeeya ee ka socda Yurub - BGR